NZVIMBO YAKANAKA KURARAMA
Maitiro ekuona nzvimbo yakanakisa yekugara papasi? - kubva pane zvakaitika kwandiri, nerubatsiro rwemhinduro kubva kune vamwe cosmopolitans nemasangano akasarudzika.
Gore rega rega zviuru zvevanhu vanomhanyira kune dzimwe nyika vachitsvaga hupenyu huri nani. Izvi zvinokonzerwa nechishuwo chekuwedzera kwavo kugara zvakanaka uye nekupa vana ramangwana rinokudzwa. Dzimwe nguva chikonzero chiri mune chishuwo chepasi rose chevatorwa vano sarudza imwe nyika zvichibva pane zvavanofarira uye zvavanofarira. Uye, hongu, chimwe chezvikonzero zvakajairika muchato wepamutemo, kudzidza uye kushanda. Maitiro ekuona nzvimbo yakanaka yekugara Pasi Pano? - kubva pane zvakaitika kwandiri, nerubatsiro rwemhinduro kubva kune vamwe cosmopolitans nemasangano akasarudzika.
Kambani yekutarisa Resonanse Consultancy yakapa ongororo yekuongorora uye kuongorora kuruzhinji maguta akanakisa ekugara muna 2021. Rondedzero yacho inosanganisira vakasarudzwa vane hupenyu hwakanaka uye vanoshanda mamiriro.
Maitiro ekusarudzika eanonyanya kukoshesa megacities ehupenyu aisanganisira anotevera mapoinzi:
Nzvimbo yenzvimbo uye epidemiological mamiriro (mamiriro ekunze, chengetedzo, huwandu hwevanhu vane coronavirus).
Mafungiro evagari vemo: tsika, maitiro kune vanobva kune dzimwe nyika, pamwe nehuwandu hwevanhu vane dzidzo yekuyunivhesiti.
Kuvapo kwenzvimbo dzakasimukira (mamuseum, nhandare, nhandare, mayunivhesiti, nezvimwewo).
Mararamiro ehupenyu: kushaikwa kwemabasa, mari yevagari, chakakomba chemuguta chigadzirwa (chakakomba chemuguta chigadzirwa).
Tsika nemitambo yekuvaraidza: maresitorendi, maresitorendi, makirabhu ehusiku, nezvimwe.
Kakawanda kwekutsvaga mumainjini ekutsvaga, kuongororwa kwekufamba uye ma hashtag pasocial network.
Anonyanya kufarirwa, achitora nzvimbo nhatu dzekutanga dzekuremekedza, aive muUK - London, muUSA - New York neFrance - Paris. Pamusoro gumi anosanganisira megalopolises muEurope, Asia neUnited States.
Wepamusoro gumi neReshonse Consultancy:
London, Great Britain). "Foggy Albion" anga akabata zvinzvimbo zvepamusoro munzvimbo ye6 makore akateedzana: iro guta rakanakisa kugara mairi. London iri munzvimbo yegumi nenhanhatu yekuvapo kwenzvimbo dzakasvibirira dzekutandara: mapaki ane mbiri, aimbove nzvimbo dzekuvhima dzehumambo, nezvimwe. Denda reCovid rakaita shanduko yaro munzira yeguta rekare: vagari vakatanga kukoshesa zvakanyanya zvavanazvo. Asi ngazvive sezvazvingave, musiyano uripo pakati pevapfumi nevarombo uri kukura zvine njodzi.
New York, USA). Imwe yenzvimbo dzakakura dzemadhorobha munyika kumahombekombe eAtlantic Ocean. Guta rezvikwiriso uye hunhu hwemweya weAmerica werusununguko. Iyo inodiwa nzvimbo kune vashanyi vazhinji uye vanotsvaga kubva kumativi ese epasi - iyo "American Chiroto" muchokwadi. Nharaunda yeRussia, iyo yakagara pano kubvira makumi manomwe ezana ramakore rapfuura uye inotungamira nzira inoshingairira hupenyu, inozadzwa gore rega nevatsva kuti vagare zvachose. Kunyangwe izvozvi zvisina kunaka mamiriro eepidemiological muAmerica, mararamiro ehupenyu anoramba ari kumusoro. Maererano nekufungidzira, muna Kurume 70, avhareji mubairo wevaAmerican yaive madhora zviuru zvishanu (anenge mazana matatu emabhuru).
Paris, Furanzi). Kuti tishandure chirevo chakakurumbira: "Ona Paris ufe", vashanyi vazhinji vanoti nechivimbo: "Ona ugare." Kurwiswa kwemagandanga hakuna kutyora muzinda weFrance: kwakapora uye kwakabudirira ndokugara kwevakawanda iro guta rakanakisa kugara mairi. Paris yakaiswa pachinzvimbo chechipiri maererano nenhamba yemamiziyamu uye yechinomwe munzvimbo dzekushanya kwechitendero. Nemvumo yezviremera kushambira muSeine, maParis ivo pachavo havadi kubva kuParis kuzhizha.
Moscow, Russia). Guta guru reRussia chimedu chinonaka chevatorwa. Ivo vanogutsikana chaizvo nezvose zviri zviviri mararamiro ehupenyu uye muhoro. Ivo vanowana zviri nyore kutaurirana uye vanogamuchirwa munharaunda yeRussia. Moscow iguta renyika dzakawanda, rine zvivakwa zvakagadziriswa, nzvimbo dzinoyevedza dzevaraidzo, nhoroondo dzekare uye zvakawanda zvinokwezva. Kune vazhinji vatorwa, iye iro guta rakanakisa pasirese. Iyo 2018 nhabvu nhabvu yakashamisa nyika yese nehuremu hwayo uye hunhu hunhu, yakavhurira rakasiyana zvachose Russia kune vazhinji vagari venyika uye yakawedzera kufarira kwavo tsika yenyika. Zvakare, iyo metro yakagadziridzwa haigone asi kufara - kudada kwepamba uko kunogona kukwikwidza zviri nyore neyekumadokero metro.
Tokyo, Japan). Guta remangwana, kunyangwe paine njodzi dzinowanzoitika mukati maro, inoonekwa seimwe yakachengeteka. Tokyo ndiro guta rechitatu rakabudirira kwazvo mupasi rose rekuratidzira kwemaguta: yechigumi nevazhinji vasingashande, chigadziko chesirivheri chehuwandu hweGlobal 11 dzimbahwe, uye yechipiri kumaresitorendi. Tokyo inonakidzwa nehupenyu hwayo hwekudyira uye hwetsika.
Dubai, UAE). Arabhiya yakasarudzika pakati pejecha regoridhe uye Gulf yeIndian Ocean. International Bhizinesi uye Tourism Center - Dubai. Guta mune tsika dzekumabvazuva dzakanyatsobatana neyakawandisa nguva. Nekuda kweye coronavirus denda, kuyerera kwevashanyi kwakadzikira zvakanyanya. Izvi zvakakanganisa hupfumi hwenyika, asi kwete zvakanyanya. Dubai inoenderera mberi kuve yakanyanya nzvimbo yakanakisa yekugara kune vakawanda vanotama.
Singapowo. Asia chitsuwa nyika-megalopolis yakawana budiriro huru kwazvo mumakore makumi mashanu - kubva kune yakashata mari uye isina kuvandudzwa polis, yakashanduka ikava simba rekumabvazuva. Inozivikanwa neayo dhizaini yendege uye, chokwadika, iyo Rain Whirlwind, iyo yakareba kwazvo mukati mekupopoma kwemvura.
Barcelona, ​​Spain). Iyo yekuvaka, yekugadzira uye yegungwa kumahombekombe eCatalan magineti evashanyi sezvo iri kupfuura panguva dzakaoma panguva yedenda. Mahara mazhinji, ayo akavhara achitevedza mahombekombe mazhinji nekuda kwekushayikwa kwevaenzi, haangambo vhura.
Los Angeles, USA). Iyo yekushanya uye yekudyira Guta reNgirozi zvishoma nezvishoma iri kutanga kuuya kune yayo njere mushure meCovid-19, asi izvi hazvitadzise kuti igare iri rimwe remaguta makuru munyika.
Madrid, Spain). Guta guru reSpain ndere mutsva mumakumi gumi epamusoro, asi chakagara chiri chinhu chekuona kune vashanyi. Hupfumi hwedhorobha hwakanyatso kusimukira uye hauregi kurwira kufambira mberi. Guta rine mamiriro ekunze akanaka kune hutano, uye ingangoita yakanaka mamiriro ekunze, dzinova nhau dzakanaka kune vashanyi. Hupenyu hwehusiku huri kupora mushure mehutachiona (nzvimbo yechitanhatu muyero yevaraidzo), kuronga kwemadhorobha kuri kuramba kuchikura.
Kugamuchira vaeni uye maitiro kune vanobva kune dzimwe nyika
Ndeipi nzvimbo yakanaka yekugara vashanyi nevaya vanoda kugara zvachose? Munyika zhinji, vanoratidzira hushamwari kuvaenzi uye vanosvika vagari vechigarire. Denda risati rasvika, maguta akadaro aisanganisira: Alicante, Malaga, Lisbon, Valencia, Buenos Aires nemamwe. Akanyanya kuvimbika maererano neiyo Expat Insider chiyero che2020 ndiyo Iberia Peninsula.
Spanish Alicante nePortugal Lisbon vane hushamwari: vashanyi vanogutsikana neyakajairwa hupenyu, varaidzo yetsika uye kugona kukurumidza kudzidza mutauro.
Kuenda kune imwe nyika dzimwe nguva kwakaoma zvikuru: zviremera zvemunyika zvinonyatso bata avo vanofamba kupota nyika vachitsvaga maguta akanakisa ekugara. Zvinowanzo kuve nezvikonzero zvakanaka zvekufamba: muchato wepamutemo, basa kana kuvepo kwemari inoshamisa.
Mukana wekuwana mvumo yekugara kana kuva mugari unowedzera pakati pevatengesi. Kuti vatore chikamu muchirongwa chemari yekudyara, ivo vanopa imwe huwandu mukusimudzira hupfumi hwenyika iyo yavari kuzogadzirisa. Vanopinda vekunze vanogona kuvhura bhizinesi, kutenga imba / furati kana kuisa mari.
Zvirongwa zvekudyara zviri kushanda nesimba kuSpain, Portugal, Greece. America iri kufarawo kupa pekugara kune vagari vane mari mune dzimwe nyika vakagadzirira kudyara mairi. Iye akaziviswa kunyorera pekugara anogona kuenda kunogara zvachose mune yekunze metropolis kuburikidza hombe kudyara munyika inogarwa.
Kunyaradzwa uye utsanana
Vienna iri munzvimbo makumi matatu nemaviri yegumi yepamusoro, uye inoonekwa seimwe yevakanyanya nzvimbo dzakanakisisa dzekugara kwete netsaona. Iri iguta rinoshamisa zvinoshamisa rine nhoroondo yezvakaitika, hupfumi hwakasimudzwa, zvivakwa zvekuvaka, uye tsika. Muguta rakagadziriswa zvivakwa, nzvimbo yakakosha inogoverwa nzvimbo dzekutandarira dzakasvibirira, mapaki, dzimba dzekofi. Vagari veVienna vateveri vezvifambiso zveveruzhinji, saka havafambi zvakanyanya mumota dzakavanzika, nekudaro vachichengetedza hutsanana hwemigwagwa uye mweya mutsva zvakanyanya. Vienna inozivikanwa muna 2021 iro guta rakanakisa kugara maererano neecology.
Austria inoda kubvumidza vanoenda kune dzimwe nyika kuti vagare zvachose neyakagadziriswa mari yekupedzisira. Uyezve, mari yekudyara haidiwe, asi vanyoreri vemvumo yekugara kana ugari hwemo vanofanirwa kupa humbowo hwekugona kwavo kwemari. Izvi zvinodiwa zvinovakirwa pane imwe mamiriro: kuve uri munyika kweinenge mwedzi mitanhatu pagore.
Iyo nhanho uye mhando yehupenyu
Zurich ndiyo nzvimbo yezvehupfumi uye iro guta hombe muSwitzerland (kunyangwe paine vanhu vashoma - vanhu mazana mana negumi nemakumi mana nevaviri) iri pamakumi matatu nematanhatu munzvimbo yepamusoro zana. Sekureva kwevanhu vazhinji vanotama iro guta rakanakisa pasirese maererano nehupfumi pamwe nekubudirira. Unodziya, wakashongedzwa zvakanaka, bourgeois akangwara uye akanyanyisa bhizinesi-senge, Zurich inokwezva zvikwama kubva kumativi ese epasi. Zvakaenzana zvakanaka kune ese hupenyu uye bhizinesi. Huwandu hwevagari vasingashande hunosvika 9. Guta iri mune gumi gumi eGlobal 500.
Switzerland inokoka vapfumi uye vakazvimiririra vanoenda kune dzimwe nyika kuti vagare zvechigarire, asi nemamiriro ekubhadhara mutero wegore-wega mutero we450000 francs. Kuti uwane mvumo yekugara, unofanirwa kugara muZurich kwemazuva angangoita mazana maviri pagore - ichi chinodikanwa chevakuru veSwitzerland.
Kune vazhinji nyika yakanakisa yekurarama uye kuita bhizinesi iUnited States of America. Sekureva kweKutanga Genome, New York, San Francisco neLondon zvinosanganisirwa mune runyorwa rwemaguta anoremekedzwa kwazvo ekugadzira kutanga.
Mwoyo weAmerica unosimbisirwa wechipiri mune runyorwa rwevanonyanya-kunyanya, kwete chete maererano nezviitiko zvetsika nenzvimbo, asi zvakare maererano nekutsvaga basa uye kuitwa kwemarudzi ese emabhizimusi mazano. New York iri pachinzvimbo chechina maererano nenhamba yemahofisi eGlobal.
San Francisco yakaita iyi runyorwa nekuda kwekuvapo kwenzvimbo yese yemasangano eetekinoroji - Silicon Valley. Iri guta guru musha wevanhu vazhinji vakachenjera vane dzidzo yeyunivhesiti, uye huwandu hwevatorwa pakati pavo hwakanyanya hukuru. Nderipi guta riri nani kugara mariri - New York kana San Francisco - munhu wese anozvisarudzira, asi zvinodiwa nekambani yekutama yeUS yakafanana kune wese munhu.
Kuti vakwanise kugara muAmerica, vanoenda kune dzimwe nyika vanofanirwa kuwana mavhiza: EB5 (ine mari inosvika madhora mazana mapfumbamwe ezviuru) kana E900000 ($ 2). EB100000 inotora mari yekuisa mari, umo pasina chikonzero chekutora chikamu mukushanda kwekambani. E5 zvinoreva kuvhura bhizinesi muUnited States. Chekutanga chete sarudzo inowanikwa kune maRussia, izvo zvisiri nyore uye zvinobatsira vazhinji nekuda kwechikonzero chekuti vachatofanira kumirira mamwe makore maviri. Uye zvakare, huwandu hwacho hwakakura kwazvo. Asi iwe unogona kuenda neimwe nzira: tanga wawana ugari hweGrenada (nyika ine chibvumirano chakasainwa nemaAmerican), uku uchibhadhara madhora zviuru gumi nezvishanu pasipoti. Uye mushure meizvozvo, nyorera American E2 visa. Kuti unyore kunyorera kuve mugari weGrenada uye E2 muUnited States, vanoisa 15000%.
London yanga iine chinzvimbo chinotungamira maererano nemararamiro ehupenyu mupasi renyika remamirioni-pamwe nemaguta kwemakore akati wandei. Mari yepamusoro yevagari, kuvapo kwenzvimbo dzakasimukira: zvivakwa zvekuvaka, mamiziyemu akanakisa pasi rose, mayunivhesiti, nezvimwewo zvinomubatsira kuti ave wekutanga. United Kingdom inopa mvumo - Investor visa kwemakore matatu kune vese vapfumi vekunze vanoshuvira kuisa mari inopfuura mamirioni maviri mukuvandudza nyika inotaura Chirungu. Vapfumi vanoenda kune imwe nyika, mushure mekubhadharwa kweUK, vanogona kurarama, kushanda nekudzidza mairi.
Guta rakanakisa pasirese Lisbon inogona kutariswa nenzira kwayo senge nzvimbo yezororo. Iri ndiro guta rekaresa uye rakakura kwazvo pasi rese, Western Europe uye chiteshi chikuru chePortugal. Nekuda kwemamiriro ekunze anonakidza eMediterranean, Lisbon ine mwaka wekunze unopisa kwazvo weEuropean uye nemazuva mazhinji ane zuva pagore. Iyo nzvimbo yekutandarira uye yakachengeteka dhorobha ine huwandu hwevanhu vanopfuura mazana mashanu ezviuru zvevanhu. Putugaro - nyika yakanaka kurarama kune avo vanoda inodziya mamiriro ekunze uye nzvimbo yemvura: Atlantic Ocean iri padyo. Muna 2020, nyika yekumaodzanyemba yakapihwa nhamba yekutanga mukufamba kweEurope.
Cosmopolitans vanowana mvumo yekugara muPortugal zvakare nerubatsiro rwezvikwereti: angangoita 250000 euros. Chiito chakakurumbira pakati peavo vanoda kugadzirisa pekugara zvachose kutora kuwanikwa kwezvivakwa: imba kana furati kubva 900000 euros.
Mune chinongedzo chechikafu chinonaka kwazvo cheguta, London inowanzo kuverengerwa pekutanga, iine maresitorendi anopfuura makumi matanhatu ane nyeredzi yeMicrosoft. London culinary establishments dzinopa vashanyi vavo uye vagari vepakutanga uye yakanakisa madhishi enyama, hove, miriwo. Guta guru reEngland rinoramba riripo iro guta rakanakisa kugara mairi uye mutsika nemagariro.
Gastronomic Center seTokyo (yechishanu muResonanse runyorwa) haigone kufuratirwa. 5 maresitorendi ane nyeredzi yeMichelin. Mazana akati wandei ezvikafu zvakasiyana zvinonaka zvine zviwanikwa zvakasikwa zvinokatyamadza vashanyi nekutanga kwavo uye kuravira kwakasiyana Chahan, imoni, wagashi, sushi - gourmets kuwira murudo uye kugara muguta reJapan kuitira kuti ugare uchifarira chikafu cheJapan.
Zvakaoma kwazvo kuwana mvumo yekugara muJapan, sezvo iri nyika diki yakavharwa ine vanhu vakawandisa. Iwe unogona kuwana pasipoti yeJapan pasi pemamiriro ezvinhu anotevera:
muchato zviri pamutemo nemugari wechiJapan / mugari;
pekugara kweanenge makore mashanu mudunhu rehurumende (chinodiwa kune vese vanyoreri).
kuraira kwakanaka kwezvose zvakataurwa uye zvakanyorwa chiJapanese;
kuitisa zviitiko zvepamutemo muJapan, zvichitarisirwa nehunyanzvi hwepamusoro hwemushandi;
iye anonyorera anofanira kunge aine huwandu hunosvika madhora zviuru makumi maviri nezvishanu.
Iwe unogona kunyengetedza zviremera zveJapan kuti zvipe mvumo yekugara kana iwe ukaisa mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora muGuta guru reRising Sun. Kuti vaite izvi, ivo vanovhura yavo bhizinesi, iyo yavanotsigira nekuvandudza nguva dzese, vachipa mabasa kune veguta. Panguva imwecheteyo, iyo vhoriyamu yemari inofanirwa kugara ichiwedzerwa.
Tokyo ichava iro guta rakanakisa pasirese yekugara zvachose, kana iwe ukatevedzera kune zvese zvinodiwa, remekedza nyika netsika dzayo uye uite mupiro wakaringana kuhupfumi hwayo.
Kutenga zvivakwa kunobatsira munzvimbo idzodzo ndeipi nzvimbo yakanaka yekugara, semuenzaniso - muBarcelona. Iri iguta reSpanish pamhenderekedzo yeMediterranean ine indasitiri ine hunyanzvi nekutengeserana, uye yakakosha nzira yemugwagwa. Iyi nzvimbo yakanaka gore rega rega denda risati rasvika rakwezva zviuru zvevashanyi, uye panguva yedenda rakavharwa kuti riwanikwe, izvo zvaisakwanisa kukanganisa hupfumi hwePortugal, uye kunyanya musika wezvivakwa. Izvozvi zvave kugona kutenga dzimba kuSpain ine 30% dhisikaundi, uye mutengo pamamirimita mita pakupera kwa2020 yaisvika 1391 euros. Kana vashanyi vadzokera kuBarcelona, ​​mitengo ichawedzera. Ivo vanoisa mari muzvivakwa parizvino vanogona kuwana mari kubva kubhadharo kana kutengesa mushure mekuvhurwa kwemiganhu.
Barcelona zvakare ine chirongwa chekudyara che cosmopolitans: mupiro kumari yeguta unosvika mazana mashanu ezviuru euros.
Kubudirira mune ramangwana
Imwe yei nzvimbo dzakanakisisa dzekugara mune ramangwana inogona kuve Atene. Ivo vari panzvimbo yechi29 mune runyorwa rwemaguta anobatsira. Guta guru reGreek inzvimbo yetsika, nhoroondo uye hupfumi ine yakanakisa mamiriro ekunze kwehupenyu. Mutengo wekugara mairi wakadzikira zvakanyanya kana uchienzaniswa nemamwe maguta akayerwa, inova nhau yakanaka kune vashanyi. Iko kugona kweguta guru reGreek kuri kukura gore rega rega, sezvo hurumende yayo iri kuita zvakanyanya mukugadzirisa hupfumi, chikuru chayo kurwisa huwori.
Ivo vanoshuvira kuuya kuAthens kuzorarama vanofanirwa kuisa mari mairi kubva ku250000 euros.
Nderipi guta riri nani kugara mariri - iye munhu amene anosarudza. Izvo zvinoitika kuti zvaakashanyira guta guru, mushanyi anowira murudo naro zvakanyanya zvekuti anorota kwekutanga kufamba. Ndezvechokwadi kuita zvirongwa zvedu, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti kugariswa kune imwe nyika hakuitike pasina kuchinjika uye nekushushikana, uye hazvigoneke pasina mipiro yemari.
AAAA ADVISERERI ichakubatsira iwe kuve mutora chikamu mumabasa ekudyara munyika dzinofarira kuwana vanhu vakazvimiririra mune zvemari. AAAA ADVISERERI inzvimbo ine rezinesi yehurongwa hwehukama hwepamutemo hwakavakirwa mukudyara nevanoenda. Pano iwe uchagamuchira rubatsiro uye nyanzvi kuraira pazvinhu zvese zvekuwana pekugara mvumo kana Citizenship neInvestment.
↑ nzvimbo yakanaka yekugara ↑ nyika dzakanakisa dzekugara ↑ inyika ipi iri nani kugara mairi ↑ iro guta riri nani kugara mariri ↑ nyika yakanaka kwazvo pasirese ↑ iro guta rakanakisa pasirese ↑ nyika yakanaka kurarama ↑ guta rakanakisa kugara ↑ ndeipi nzvimbo yakanaka yekugara ↑ nyika yekugara ↑ guta rekugara ↑ mvumo yekugara nyika ↑ zvachose kugara nyika ↑ yekugara zvachose ↑ ibva munyika ↑